Iindaba -Imarike yobugcisa yobugcisa phantsi kobhubhane kunye nemilinganiselo ethathwe yinkampani yethu
Ukusukela ngeyoMqungu walo nyaka, ubhubhane uqhubekile kwaye iindawo zeentengiso, iindawo zentselo, iindawo zokutyela kunye neendawo zikawonke wonke zivaliwe Ukuza kuthi ga ngoku, lo bhubhani uqhubeke phantse isiqingatha sonyaka, okhokelele ekuweni kwezoqoqosho kwihlabathi liphela kunye nenani elikhulu lokungabikho kwemisebenzi; Ukongeza kolunye urhwebo lwamanye amazwe alunathemba ngenxa yezinto zehlabathi; Ngokunwenwa kwalo bhubhane, indawo ezininzi zokutyela, zokutyela, ezokwenza imveliso yobugcisa, njl. Ziyekile ukusebenza, njl. oku kukhokelele ekunyukeni ngesiquphe kwintengiso yezixhobo zebhiya yobugcisa. Ukunciphisa ifuthe lobhubhane, inkampani yethu ihlaziye uthotho lwamanyathelo, ngolu hlobo lulandelayo:
1. Ukuphuculwa kwemveliso ukuphucula umgangatho wezixhobo zebhiya kunye nexabiso elongeziweyo lezixhobo; iinjineli zethu zisebenzisa iimfuno zabathengi kubugcisa bokupheka, ukuze abathengi babe namava angcono;
Hlaziya kwakhona iwebhusayithi kwaye ubonise iimveliso zethu ezilungileyo kubathengi;
3. Qeqesha iinjineli zethu emva kokuthengisa ukuba zilungiselele abathengi ngcono;
4. Nciphise amaxabiso ezixhobo ukuthengisa abathengi abaninzi ukuxhasa ukuqala ishishini lotywala ngokukhawuleza, kunye nokunciphisa ixabiso ngokwesiseko sokuphuculwa komgangatho wemveliso;
5. Ukuphucula inkqubo yangaphakathi yenkampani;
Ndiyathemba ukuba singcono kwaye sikhonze abathengi abaninzi;
Ngokwamayeza, kuye kwaqinisekiswa ukuba ukusela ngokumodareyitha kunokuzisa impilo yokwenyani emzimbeni womntu. IHuaian inciphisa i-cholesterol, yomeleza ubukrelekrele, kwaye ivuselele ukukhuthazeka. Ukuba uZhang ungumntu omdala ofikelele kwiminyaka yobudala yokusela kwaye uthanda ukonwabela iglasi yePinot Noir iwayini rhoqo ebusuku, uZhang kufuneka abenakho ukuxabisa iziphumo ezimangalisayo zokusela ngokuphakathi. Nangona kunjalo, ukuba uZhang uyakuthanda ukusela utywala, uZhang usenokungabinalo ithuba lokusela kakuhle. Makhe sijonge izibonelelo zokusela ngokulingeneyo emzimbeni womntu. Isikolo seBhiya saseDumens.
Uphuhliso oluqhubekayo lwetekhnoloji yale mihla yokupheka ibhiya ibonelela ngamathuba amakhulu okwanelisa abathengi iinketho ezahlukeneyo kunye neemfuno ezingamanyala. Okwangoku, ngokunzulu okungapheliyo kunye nophuhliso lohlaziyo kunye nokuvula, ibhiya emnyama enomtsalane oqhelekileyo ingene ngokukhawuleza kwimarike yelizwe laseChen Mou, kwaye iya isiba yinto yokubaleka kwabantu kubomi banamhlanje.